နှစ်သစ်ကူး ကာလတွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်ရေကန်နှင့် လေသာတောင်သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည?? - Yangon Media Group
တီးတိန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁
ခရစ္စမတ်ရက်နှင့် နှစ်သစ်ကူးကာလတွင် ချင်းပြည်နယ် လေသာတောင်အပန်းဖြေစခန်းနှင့် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ် ရိဒ်ရေကန်သို့ ပြည်တွင်း ပြည်ပဧည့်သည်များ နေ့စဉ်ရာချီ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ”ကျွန်တော်တို့ ရိဒ်ဒေသခံ တွေနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည် နယ် ဒေသခံတွေက ရိဒ်ရေကန်မှာ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ ဝိညာဉ် တွေနေထိုင်တယ်လို့ အယူအဆ တစ်ခုရှိတယ်။ ခရစ္စမတ်ရက်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးရက်ပိုင်းမှာ တစ်ဖက် နိုင်ငံက ဧည့်သည်တွေလာပြီးဆု တောင်းကြတာရှိတယ်။ နေ့စဉ် ဧည့်သည်ရာချီပြီးလာတယ်။ အခု နှစ်သစ်ကူးမှာလည်း ဧည့်သည် တွေလာနေပါတယ်။ ပြီးတော့ လေသာတောင်အပန်းဖြေစခန်း ဘက်မှာတော့ ကလေးမြို့ဘက်က ဧည့်သည်တွေ ရာချီလာပါတယ်။ ပျော်ပွဲစားလာရောက်တာရှိသလို ဘာသာရေးဆုတောင်းပွဲအတွက် လာကြတာလည်းရှိပါတယ်”ဟု တီးတိန်မြို့နယ်ခွဲ ရိခေါဒါရ်မြို့ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားသည်။
ခရစ္စမတ်ရက်နှင့် နှစ်သစ်ကူး ကာလတွင် ချင်းပြည်နယ် ဟားခါး မြို့နှင့်ပြည်နယ် အမှတ်တရနေရာ များဖြစ်သည့် ခေါ်နူးစုမ်(ခေါ်) နတ် မတောင်ဒေသ၊ ကန်ပက်လက်မြို့၊ မင်းတပ်မြို့နှင့်ဘုံတလာရေတံခွန် တည်ရှိရာ မတူပီမြို့များသို့လည်း ကောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဒေသအမှတ်တရနေရာများဖြစ် သည့် ရိဒ်ရေကန်၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ် ရိဒ်သို့လည်းကောင်း၊ လေ သာတောင်၊ ဖို့ဝှက်စခန်း၊ ရှား လုမ်းခံတပ်၊ ကနေဒီတောင်နှင့် ကနေဒီဆင်စခန်းများသို့ ပြည် တွင်းပြည်ပဧည့်သည် ထောင်ချီ ဝင်ရောက်မှုရှိကြောင်း ချင်းပြည် နယ် ဖလမ်းခရိုင် ခိုင်ကမ်းမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မှ သိရသည်။
”အခုနှစ် ခရစ္စမတ်ရက်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလတွေမှာ ချင်း တောင်ကိုလာရောက်ကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေ တော်တော်များပါတယ်။ လမ်းတွေကလည်း နှစ်တိုင်းထက် ကောင်းမွန်လာပြီဆိုတော့ မန္တလေး၊ ရန်ကုန်ကနေ တိုက်ရိုက်ကားတွေ နဲ့လာကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေများ တယ်”ဟု ကန်ပက်လက်မြို့မှ မြို့မိ မြို့ဖတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ခရစ္စမတ်ရက်နှင့်နှစ်သစ်ကူး ကာလတွင် ခေါ်နူးစုမ်(ခေါ်)နတ်မ တောင်နှင့်ဘုံတလာရေတံခွန်တို့ ၌ တည်းခိုခန်းများအားလုံးပြည့်နေ ပြီး ဧည့်သည်တချို့သည် ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းနှင့် ဘုရားကျောင်းများ ၌ နေထိုင်ခဲ့ရသည်။
မိုးမရွာသဖြင့် ရေကျနည်းနေသော ဘုံတလာရေတံခွန်သို့ ခရီးသွားဧည့်သည် လာရောက်မှု မရှိသလောက်ဖြစ်?
ကျိုက်သလံ္လစေတီတော် ပြန်လည်ပြုပြင်ရေး ကျပ်သိန်းလေးသောင်းကုန်ကျနိုင်